चाक्सीबारीका रहस्यमय दुई भेट, कांग्रेसमा भुकम्प ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
चाक्सीबारीका रहस्यमय दुई भेट, कांग्रेसमा भुकम्प ?
चाक्सीबारीस्थित पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा आज महत्वपूर्ण दुई भेट भएका छन्। पहिलो भेट नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव प्रकाशमान सिंहबीच भएको छ। नेकपा महासचिव विप्लव आफ्नो पार्टीले अघि सारेको जनमत संग्रहको मुद्धालाई लिएर भेटघाट भएको हो।